Par Taratra sur 10/04/2017
Namaly ny hetahetan’ny mpankafy, ka namerina ireo hira tsy dia fanaon’ny Lôlô sy ny tariny firy ry Benny sy Bebey ary Sefo, ny alin’ny zoma teo, tetsy amin’ny Piment Café Behoririka. Na vitsy aza, aleon’ny mpankafy hatrany misy azy ireo miaka-tsehatra, manohy ny “Revy Lôlô”.
: Nafana ny fihaonana rehefa ela tsy nihaona. Mbola eo hatrany ireo mpankafy an’i Njila, indrindra ny fiarahany an-tsehatra indray tamin’i Poopy. 40 taona an-tsehatra i Njila, ary tsy mbola hitsahatra hatreo. Mbola hitohy…
Rock sy moto, samy mitovy mpankafy. Voaporofo izany nandritra ny hetsika “Madagascar Biker Show”, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Nanafana ny sehatra ny asabotsy ny Tselatra, narahin’ny tarika Kiaka ny alahady
Tontosa soa aman-tsara ny “Vaky sehatra 2017” ho an’ny tarika Ny Ainga. Voaporofo tetsy Antsahamanitra koa fa mbola iray ny tarika Ny Ainga fa tsy nisy ny fivakisana, araka ny feo mandeha. Tsy vitan’izay, mbola eo hatrany koa ireo mpankafy.
Nametraka tantara teo amin’ny mozika Malagasy. Ho fisaorana sy fankasitrahana azy, nisy ny “Pao-tsatroka” ho an’i Fidimalala, izay notontosaina tetsy amin’ny CCEsca Antanimena, omaly. Notolorana ny mari-boninahitra “Commandeur de l’Ordre National” ihany koa izy.
Nampahafantarina ny asabotsy teo, ilay “jeu vidéo” Gazkar. Lalao amin’ny endriny 3D izay azo lalaovina amina finday “android” ka alaina ao anatin’ny “Play Store” izany. Ny Lomay sy ny Orange Madagascar no tompon’antoka amin’ity* “jeu video” Malagasy ity. Nanantontosa : Fano , Tiana, Zo ny Aina